Somaaliya oo ka qayb galay Shir caalami ah oo Ganacsiga aduunka looga hadlayo – Radio Daljir
Somaaliya oo ka qayb galay Shir caalami ah oo Ganacsiga aduunka looga hadlayo
Janaayo 28, 2018 12:02 g 0
Shirkaani oo ahaa mid loogu hadlaayey ganacsiga iyo maalgashiga wadamada carabta iyo Malaysia ayaa waxaa kasoo qeyb galay xubno ka kala socday dowladaha wadamada carabta, dowladda Malaysia, ganacsato gaaraysa 6000 iyo maalgashadeyaal kor u dhaafaysa 300, kuwaas oo kala socday wadamada caalamka.
Dowladda Soomaaliya iyo xubno matalayay Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sanadkaan markii ugu horeesay ka qeyb gashay shirka iyagoo shirka ku soo bandhigay fursado muhiim ah oo ay ka qeybgalayaasha ugu muujinyeen fursadaha maalgashi ee ay ka heli karaan dalka Soomaaliya.
Wafdiga Dowladda Soomaaliya waxaa hogaaminaayey Uqeybsanaha ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ee u fadhiya dalka Malaysia mudane Maxamed Amiin Abuukar.
Mudane Mohamed oo shirka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku faraxsanahay in markii ugu horeysay ay kasoo qayb gasho shirkaan muhimka u ah isdhexgalka ganacsiga wadamada carabta iyo Malaysia, wuxuu ugu baaqey ganacsatada iyo Maalgashatada kasoo qeyb gashay shirka in ay maalgashaan wadanka Soomaaliya oo uu sheegay inuu yahay wadan soo koraaya islamarkaana fursado badan ay ka jiraan.
Sidoo kale wuxuu u qeybsanaha sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay soo dhoweyso cid walba oo doonaysa inay ka qeyb qaadato fursadaha ka jira dalka Soomaaliya.
Shirkaan ayaa ah mid sanadle ah oo ay kasoo qeyb galaan Dowladaha carabta, ganacsatada iyo maalgashatada caalamka.
Lacagta Shilign Somaliga ah oo mudo kadib laga isticmaalay Baladweyne (dhegayso)